Etu esi etinye akwụkwọ ahụaja dị iche iche na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Estamos tupu otu n'ime arụmọrụ ndị anyị nwere na Windows 8 ọ na-apụ n'anya na mberede na Windows 10 site na anwansi. O doro anya na ụmụ okorobịa si Redmond nwere ihe kpatara ha, mana ndị nke anyị nwere nhazi ọtụtụ nyocha, nke anyị na-abawanye, nwere ike ịhapụ ntakịrị naanị na nke a mgbe tupu anyị enwee ike ịnụ ụtọ ụdị ọrụ ahụ dị egwu.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile na-efu, ebe ọ bụ na site na usoro ndị a na Assassin Vinegar Anyị ga-egosi gị otu esi eweghachite obere nkọwa a mana ọ dị mkpa maka ụfọdụ ndị ọrụ na-enwekarị ọ Windowsụ na Windows nwere ihe nlere abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị. Site n'ụzọ, ịza ajụjụ na nke a, mgbe iji usoro a mara gị ọ dị ka ihe nlere anya dị gị obere.
Windows Ọ nwere nhọrọ dị mfe nke na-enye gị ohere iji akwụkwọ ahụaja dị iche iche na nhazi multi-monitor. Otu nhọrọ nke ndị Redmond tụrụ anya iwepụ ya na ndabara na Windows 10 iji juju mmadụ ole na ole anya. Luckily anyị mgbe niile nwere ike tweak ihe na software iji mee ka atụmatụ ndị a azụ.
Site n'enyemaka iwu ị nwere ike weghachite ọrụ a na Windows ka ọ rụọ ọrụ dịka ọ mere na Windows 8.
Etu esi edobe akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ọtụtụ monitors
Vamos mbụ na-agba ọsọ menu anyị nwere na Windows 10. Iji nweta ya anyị ga-pịa igodo ụzọ mkpirisi Windows + R.
Ozugbo emere nke a, menu mmemme mmemme ga-apụta ebe anyị ga-pịnye ma ọ bụ Tapawa ndị na-esonụ:
njikwa / aha Microsoft.Personalization / ibe peeji nke Akwụkwọ ahụaja
Anyị pịa tinye na ntọala ka ịgbakwunye ihe oyiyi na «Akwụkwọ ahụaja» ga-apụta. Site ebe a, iji nri aka nri pịa ihe oyiyi ị nwere ike ịhọrọ ileba anya ebe anyị chọrọ ka ọ pụta.
All obere omume na inweela n'aka gi ọzọ in na-adịbeghị anya Windows 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi etinye akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ntanetị dị iche iche na Windows 10
okwu ahụ zuru oke, ọ naghị echekwa mgbanwe ndị ahụ.
Zaghachi Laura Victoria
Enweela m ihe ngwọta. Ga-enwerịrị onyonyo abụọ ahụ echekwara n'otu folda ahụ (dabere na ọnụọgụ nke ndị nlele anyị nwere, n'ọnọdụ m naanị 2). E mesịa, ị ga-pịa igodo CTRL wee kwụsị ịkwụsị ịpị igodo a ka anyị họrọ onyonyo izizi nke ga-emetụ ihu na ihuenyo izizi, na onyogho nke abụọ nke ga-echinye na ihuenyo nke abụọ, wee pịa aka nri wee họrọ nhọrọ setịpụrụ dị ka ndabere ihuenyo na nke edoziri.
5 nnukwu hoaxes banyere WhatsApp nke ihe niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile kwenyere n'oge ụfọdụ